ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “သူ့ဒုက္ခ”
“သူခိုးလက်ခံ ထိုနိုင်ငံ” ပို့စ်မှာ စာဖတ်သူတယောက်ရဲ့ ကွန်မင့်ကို ဖတ်ရတဲ့အခါ ဆရာသော်တာဆွေ တခါက ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ ဟာသလေးတခုကို သတိရမိလို့ မှတ်မိသလို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
တခါက အပျိုကြီးတယောက်က ရဲစခန်းကို ဖုန်းဆက်ပြီး တိုင်တောသတဲ့။
“ကျမအိမ်နားက မြစ်ဆိပ်မှာ ကောင်လေးတွေ ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပြီး ရေလာချိုးကြတာ ကျမအဖို့ အလွန်အမင်း စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရတယ်ရှင့်”
ဒါနဲ့ တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိက ဒီကိစ္စကို သူတို့ ဖြေရှင်းပေးပါမယ်လို့ ကတိပေးလိုက်တယ်။
နောက် ၂ ပတ်လောက်ကြာတော့ အပျိုကြီးက ဖုန်းထပ်ဆက်ပြီး ရဲစခန်းကို တိုင်တောပြန်တယ်။ တာဝန်ကျရဲက….
“မဖြစ်နိုင်တာခင်ဗျာ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကပဲ ကောင်လေးတွေကို အစ်မကြီးအိမ်ကနေ တမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ နေရာမှာ သွားချိုးကြဖို့ ကျနော်တို့ သေသေချာချာ မှာထားပါတယ် ခင်ဗျ”
အဲဒီအခါ အပျိုကြီး ပြန်ပြောပုံက….
“ဒါပေမယ့် ကျမ မှန်ပြောင်းနဲ့ လှမ်းကြည့်တော့ မြင်နေရတုန်းပဲရှင့်”…. တဲ့။
Posted by ကိုပေါ on Monday, September 21, 2009
kom: နောက်တစ်မျိုး..ရှိသေးတယ်။ ပြုတင်းပေါက်က မြင်ရတယ်ဆိုတာ. ဟာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး. ပြူတင်းပေါက် က အမြင့်ကြီးဘဲဆိုတော့.. ..ဟင်. ကျွန်မ ကုလားထိုင်ပေါါ်ကတက်ကြည့်ရင်မြင်ရတယ်ရှင့်။
ဟီး အပျိုကြီးတွေ တကယ်မလွယ်ဘူး...
September 21, 2009 at 8:33 PM
Ha ha ah, I like that.
September 22, 2009 at 12:33 AM
ွှthis is Ko Paw's style.
September 22, 2009 at 3:49 AM
so funny. :D
ကြည့်ရတာ အဲဒီအပျိုကြီး ခုံပေါ်တက်ပြီး ပြတင်းပေါက်ကနေ မှန်ပြောင်းနဲ့ ကလေးတွေ ရေချိုးတာကို ချောင်းတယ်ထင်တယ်။ အဟေးဟေး...
ခုတလော ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားမော်ကား လုပ်တာတွေ များလာသလိုဘဲ ဟိုတလော ဗုဒ္ဓ ရုပ်ထုကို ၀ိုင်းပြီး နမ်းနေတဲ့ပုံတွေထွက်လာပြီး ခု Mac book တို့ Ipop တို့ထုတ်တဲ့ APPLE က သူ့ကြော်ငြာမှာ ထပ်ပြီးစော်ကား ပြန်ပြီ ငြိမ်ခံမလား ပြန်ပြောမလား သူ့ product တွေကိုရိုက်ချိုးမလား အောက်ကလင့်မှာ သွားကြည့်ကြပါ http://www.fastcompany.com/blog/gizmodo-staff/gizmodo/important-message-about-apple-industrial-design-jon-ive-blockquote
u think that story is funny?
u still don't know that its inappropriate to be naked in public?
btw nowadays US is changing its stand on MM... now direct engagement is in.. isolation is out.
when r u going to change ur view - view that u believe only sanction is the way to go?
it shows that u has suchalittle brain and r not able to understand things happening around u..
့Hi Zaw Zaw
wht the hell u talking about? how stupid u r!i know who u r !! stop fucking around !!
u know me? so wat? do u think im scare of ppl like u, idiots?
Zaw Zaw ဆိုသူသို့...
ဉာဏ်ပညာ (ဦးနှောက်) ကြီးမားပုံရတဲ့ မိတ်ဆွေကို အပြင်မှာ ဆုံခွင့်ရရင် ကော်ဖီသောက်ရင်းဖြစ်ဖြစ် ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေဆီက ပညာဉာဏ်နဲ့ ဗဟုသုတကို ဆည်းပူးရတာပေါ့။ မိတ်ဆွေ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ ကျနော်သိမှာ စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့လေ။း-)
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မတွေ့နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ကျနော့်အတွက် လူတော်တယောက်နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့် ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ ၀မ်းနည်းစွာ ယူဆလိုက်ပါမယ်။
September 28, 2009 at 7:22 PM
ဇော်ဇော် လို Psycho သမားနဲ့ တွေ့ လို့လည်ပင်းညစ်လိုက်မှာ မကြောက်ဘူးလား.. သူ့ ခမျာ ကျပ်ပြည့်ရှာတာမဟုတ်ဘူး..
ကျနော်လည်း ဇော်ဇော်ကိုအပြင်မှာ တွေ့ဖူးချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ခပ်လှမ်းလှမ်းကပေါ့။ အဟိ..လည်ပင်းညစ်လိုက်မှာ ကြောက်လို့။
September 29, 2009 at 9:43 AM
Blogger Ko Paw said...
အပေါ်ကကောင်ကို သောက်လဒူလို့ပဲမှတ်တယ်လို့ ပြောမလို့။ အဲဒါ ကိုပေါရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်ရေးခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ မကိုက်မှာစိုးလို့ မပြောတော့ပါဘူးဗျာ။
လဒူဆိုတော့လည်း လဒူပေါ့ ငါ့ညီရယ်
ငါ့ညီသိဖို့က ငါနဲ့ အမြင်ချင်းမတူရင်
ရန်သူလို့ သဘောမထားပါဘူး အကိုရယ်။ လဒူလို့ ထင်ရုံလေး ထင်တာပါဗျာ။ ကျနော် ထင်တိုင်းလည်း ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာ ဆိုသလို၊ ကျနော် မထင်လည်း ဟုတ်ချင်ဟုတ်နေမှာ ဆိုတာကို နားလည်ပါတယ် အကိုရယ်။
September 29, 2009 at 7:13 PM
zuu yaw said...
ဒူမယောင်နဲ့ တကယ်လည်း ဒူသူ…
မဒူသယောင်နဲ့ တကယ်လည်း မဒူသူ…
အမည်မသိ…အဆိုအရ… မဒူ့တဒူလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီတော့ စုစုပေါငး ဒူငါးမျိုးပေါ့၊း-)